Ahoana no very Efa ho 200 Bitcoin varotra ity volana lasa - Blockchain News
An fianarana Tantara amin'ny Reddit, izay naniry ny hijanona tsy mitonona anarana.
Noho izany, ela tantara fohy, Nanomboka raharaham-barotra isan-taona lasa izay, nisy sisiny maniry ny hazakazaka rehetra avy amin'ny 1k ny 19k ( indraindray fanakatonana ny ambony, indraindray fanakatonana aloha loatra, na tara loatra, fa manao tombony foana)
nitodika aho 3 ambany btc izay nanananareo hatramin'ny milalao Poker (tamin'ny fotoana 3k) ho efa ho 200 BTC izay efa 4 tapitrisa teo an-tampony, ary ho 2 tapitrisa amin'ny vidiny amin'izao fotoana izao.
Nieritreritra aho dia manam-pahaizana ara-barotra, andriamanitra, na inona na inona. Na izany na tsy, izany no toerana manomboka ny alahelo.
Taorian'ny fanariam avy 19k ny 11k ela aho, dia eo amin'ny farany ambany, ka dia nitandrina ny manampy ny toerana eo amin'ny Aza kivy ny 12k 13k, 14K. dia, amin'ny maty ny 16k saka, ny toerana dia bebe kokoa 100 BTC in tombony. Raha tokony fanakatonana avy eo ary manana tanteraka 300 BTC, Aho, ary nitombo nitombo leverage toerana ny habeny. Ity toerana manontolo dia liquadated ny rano indray mitete miverina any 12k, noho ny teny efa nifindra ka be dia be. Nariako 100 btc taratasy tombony ary efa ho 50 BTC sisiny. Aho devasted, ary nidina ho any 150 BTC tanteraka.
Rehefa avy fanombanana ny toe-draharaha, Dia tonga teo amin'ny famaranana ny paompy ny 16k saka dia maty ary isika handeha ambany. Koa izany no shorted. amin'ny 12k. Added amin'ny 13k. Added amin'ny 14 ary 15k. Natao noravàna ny tao an-tampon'ny amin'ny 17k. hafa 50 BTC very. Down ny 100.
Eritrereto, OK izahay, dia ambony kokoa amin'ny 17k avo, uptrend indray. dia ela. Natao noravàna ny amin'ny 13k.
50 BTC sisa. rava, antoka, tsy Vakio ny whats mitranga. Nipetraka ny alalan 'ny rano indray mitete ho 9k, rehefa bounced nieritreritra aho fa mety ho ny ambany. naniry mafy amin'ny 11500, tahotra mihidy 10500. Rehefa nandeha tany 13k mandaka ny tenako aho noho ny tahotra famaranana, dia ela amin'ny 12800.
Noravàna ny androany maraina ho an'ny bitcoin farany.
3 BTC ho 200, ny 0
Amin'izao fotoana izao aho mbola tohina, ny volana vitsivitsy farany Ive tsirambina ny fifandraisana sy ny sekoly, ary Ive no daydreaming momba ny fiainana ny fiainana avo manan-karena tahaka ny fuck miaraka amin'ny olona an-tapitrisany.
ankehitriny, Aho na aiza na aiza.
Fandefasana izany koa ny hafa izy dont hiloka vola manova ny fiainana. Dont te fanomezana na soso-kevitra tsy nandefa ny adiresy dont PM ahy. I tsy te handre ny teny btc indray satria te-hanadino
gypsytoy Tsy toa ho avy indray. Raha jerena ankapobeny dia mitovy ny tantara araka ny OP afa-tsy izay niala vola ny zava-drehetra aho (amin'ny maha-mpianatra ambaratonga ambony) mividy 60 BTC in 2013 ary mitana mafy ho mafy 4 taona. Ary ny fananana ara-tsaina nandritra ny krizy ara-pahasalamana 2016 ary manome 20 BTC ho any olon-kafa an-tserasera izay nanararaotra ahy, tsy ho hita indray. Avy eo, tamin'ny Desambra, andro talohan'ny ambony, Nianatra ny zavatra tena nisy sisiny varotra. Somary very saina kely. Very vola tsara rehefa hatory nandritra ny rano indray mitete ary avy eo ny misambo-zavatra rehetra (40 BTC) any amin'ny 0.02 BTC.
Mihoatra rava aho. Matoky aho fa handeha ho any aho hamarana ny fiainako noho izany, ary efa nanomboka aho nanasaraka ny tenako amin'izao tontolo izao sy hahazo ny raharaha mba. Mahatsapa hafahafa manambara sy manaiky izany amin'ny reddit Google, fa ity lahatsoratra ity mamely an-trano, toy ny manao ny iray amin'ireo lehibe indrindra momba ny lehilahy zana-drahalahy, izay namono ny tenany amin'ny toe-javatra mitovy.
Deraiko ireo izay afaka handresy tsy fahombiazana toy izany nefa aho tsy ny iray tamin'izy ireo. Fantatro avy amin'ny minitra namaky ny taratasy fotsy izay Bitcoin dia lalao fiovan'ny hevitra. Dia nampidina ny tahiry ho ao anatiny, antoka fa ny niisa ho mendrika iray tapitrisa (20K) ao anatin'ny 5 taona (Aho hoe efa ho tanteraka izany). Izany dia midika hoe tsy tahaka Te-hiaina fiainana mirenty, Fotsiny aho te-hahatsapa ara-bola soa aman-tsara ho indray mandeha teo amin'ny fiainako ary naniry ny hizara ny harena amin'ny ireo izay akaiky ahy sy hanampy amin'ny fananganana orinasa tsara sy ny tsara kokoa izao tontolo izao. Ny paompy sy ny dumpers sy Lamborghini meme dia tena isalasalana, izao tontolo izao toy ny hoe mila tsy hifankahitana intsony mpikatsaka fahafinaretana fanjifàna. Nihalehibe tsara tarehy ory sy bounced avy Foster an-trano mba hahatonga an-trano sy tany an-tsekoly any an-tsekoly. I zara raha nanao azy amin'ny alalan'ny oniversite sy ny tsy fahaiza-manao marketable. Very ny maty farany asa varotra volana vitsivitsy indray, ary tsy afaka mitondra ny tenako mba hiverina any zara raha mahazo Buy. Natao mafy aho nandritra ny taona maro, na dia efa azo antoka fa afaka nampiasa ny vola indraindray. Foana aho nitondra ny sakafo atoandro aho mba hiasa sy nandray ny metro foana rehefa afaka fa tsy handoa for Uber. Dia vola dolara vitsivitsy indray alina ao 2013 ary tsy nahita ariary izany. OP dia mihoatra noho ny fitiavany Ahy mendri-kaja tokoa satria tsy manana fanajana ny tena mba handa fanomezana aho, fa tsara tarehy koa ny olona sasany fa tsy fanomezana ny kely tafika ny olona ao amin 'ny toe-javatra, ary mazava ho azy fa I Don 'T mendrika izany ihany. Rehefa mihazakazaka ho namana, foana izy ireo manontany mikasika ny fomba tsara aho, satria tsy maintsy manao fantany no naha-Bitcoin proponent nandritra ny fotoana ela. Mitsiky dia nijery azy teo amin'ny masony raha miresaka tsara momba ny Bitcoin dia mampino no fanoratana ary te hanipy avy hatrany ao amin'ny dabam-pako akaiky indrindra rehefa afaka izany,.
Fantatro-toeran-kafa eo amin'izao rehetra izao, misy 'ahy’ izay nanapa-kevitra manohitra sisiny varotra na nijanona vitsivitsy taorian'ny fatiantoka na tsy omby no manomboka milalao am-piandohana ny bera tsena. Tsy ahy aza, Ny adala aho ka nandanilany foana ny hany zavatra mandeha ho ahy eo amin'ny fiainana. Manantena aho fa ny hafa mihaino ny fampitandremana, fa fantatro fa tena tsy. Na izany na tsia, Tsy manana ny karazan-tsaina hamela zavatra toy izany aho handeha ka tsy haharitra hijery Bitcoin volana indray ka ho tavela. Mampalahelo fa afaka toy izany ny vola fahefana olona. Fantatro fa maro no efa niova be ny fiainany ho tsara kokoa, fa Mihevitra aho fa misy lafiny roa ny vola madinika.
Tsy mahalala akory ny antony mbola obsess ny Bitcoin sy zana ity. I ara-bakiteny tsy afaka mieritreritra na inona na inona hafa ny ankamaroan 'ny fotoana. Heveriko fa manantena foana aho dia hidina any ambany dia ambany ny sasany vola aho ary ho afaka ny hividy indray ao nefa tsy misy dikany aho, satria tsy manana $10 ny anarako mba hametraka indray amin'ny. Handeha aho ny tsy fananana asa very tombontsoa sy ny trano fonenana tao anatin'ny volana vitsivitsy, ary tena Tsy misy toerana intsony hiverina indray mandeha izay mitranga.
Fantatro fa ny ankamaroan'ny olona no misintona ny tenany araka ny bootstraps ary hanohy fa fantatro fa afaka na oviana na oviana afa-mandositra ny saiko. Miala tsiny ny tsikera mavaivay ratsy amin'ny tsara fanahy ka niady hevitra fanehoan-kevitra. Enga anie OP ny tsara indrindra ary toa manana toe-tsaina tsara kokoa manoloana ny fahoriana mafy noho ny ataoko, na dia eo aza ny tsatòka satria izay be kokoa.
Ovay: I ankamaroany hanenina fandefasana izany. I karazam-kevitra izany dia hatao nalevina, tsy tonga saina fa mbola kofehy tsara tarehy miasa sy izay nivoaka tao amin'ny fanehoan-kevitra an-tampony. Misaotra ho an'ny fanehoan-kevitra, Pms sy ny tsara fanahy teny. Aho tsy avy hatrany na inona na inona, ary ny loza dia tsy miezaka hiantra hanomboka ny fety ho ahy. Na izany aza, Misaotra anareo rehetra noho ny fiahianao.
JungleSumTimes Tonga any aho. Very ny fanjakany manontolo 10 taona maro lasa izay. Miverina amin'ny efamira iray. Ianao, mangidy sy tezitra nandritra ny fotoana fohy. Andramo fiovam-toerana manodidina. Fiovam-Latitude.
Mianatra fotsiny ny maneho fankasitrahana noho izay manana. Na izany aza manana ny mahita tsara? Ny tananao mbola miasa? Ianao milaza mahay vazivazy? ny fototra. Misaotra ny kintana mandrakizay-be fitiavana mihoatra noho izany zavatra izany.
Satria manana vola na tsy manana vola tsy manova marina hoe iza ianao. Miasa amin'izany lehilahy. Omeo azy ny sasany miraviravy. Hiverina ianao. Fotsiny, ary mitaky fotoana be dia be ny hamela ny tenanao.
Rabbit0123 Izany dia midika hoe mandeha ho OK.
Misy tantara iray momba ny lehilahy Shinoa izay nanana soavaly sy ny tsara tarehy ny olona rehetra momba azy, saro-piaro, hoe toy ny "Dude ianao dia manan-karena". Mitsiky izy ary mamaly "Haha ho hitantsika". Amin'ny fotoana sasany dia nihazakazaka ho any an-ala, ka olona hoe: "Enga anie ianao marina, izy no lasa ary dia atao ny olona !". Namaly izy hoe: "Ho hitantsika eo". Tamin'ny volana vitsivitsy ny soavaly dia niverina niaraka tamin'ny soavaly hafa – ankizilahy izy, hita ao anaty ala. Ny olona gaga "Wow izao ianao no manan-karena indrindra ao an-tanàna ny olona, tokony ho faly!". Izy mamaly "hitantsika" indray. Ary ny zanany lahy raha mbola miezaka ny bibidia mitaingin-tsoavaly nianjera ary nanapaka ny tongony… izay tena ratsy ny toe-javatra ao Moyen Âge Shina . "Oh izany harena rehetra nivadika ho ozona". "Ho hitantsika!". Tao anatin'ny roa samoina emperora ny Sinoa nanomboka ny ady, ary naka ny salama zazalahy avy amin'ny tanàna, afa-tsy izay nanana torotoro tongotra mazava ho azy. Ny olona dia rava. "Akory re ny marina lehilahy anti-panahy ianao , izao isika na inona na inona, malalantsika lahy efa lasa hiady amin'ny adala ady, ary efa nitandrina ny soavaly sy ny zanakao !". Hamantatra izay namaly!
Izany ny tena zava-misy sy tena mampalahelo ato ihany izahay rehetra mba hizara ny fanaintainana sy ny fijaliana. Ny zava-dehibe ny mahatsiaro fa na dia vitsy ihany no very BTC, ary ny fiainana dia tsy dehibe ary tsy izany ihany Downs, dia fifangaroan-roa. Tsy dia tena ao amin'ny heriny tsy mba faly loatra amin'ny dehibe, ary rava koa ny Downs, rehefa afaka indray misy ny hafa manaraka , mijanona misokatra.
Izany dia midika hoe mandeha ho Eny Dude, dia ekena na dia ankehitriny aza. Ho hitanareo.
gypsytoy Misaotra, olona. Izany no tena tsara tarehy fanoharana maharesy lahatra ary tsy nandre azy eo anoloan'ny. Marina fa misy foana ny zavatra miova ho tsara kokoa na ratsy ary misy zavatra maro tokoa velona, Vao fantatrao fa ho sarotra, na tsy azo ho ahy ny hamotsotra ity nanjo manontolo. Ny saina efa mampijaly ahy, ary ankehitriny dia manana bunch solika bebe kokoa hanao izany.
mamerina ny fisaorana anao, Aho nitondra ireo fanehoan-kevitra am-po.
doc_samson Raha tianao ny tantara mba tia mamaky boky sasany ao amin'ny Zen. Ary nisy iray indrindra, tsy tsaroako ny anarany hoe:, nefa fa tena kely, ary tena matevina sy marina nanana fanoharana iray isaky ny pejy na roa. Indrindra fa misy boky momba ny mpiady Zen fanahy. Maro ny toy hanaiky ny ho faty mba hahafahanao tena miaina isan'andro amin'ny fahafenoany, sns.
Tao koa ny Shinoa Te Ching filozofia boky. Ary angamba ny sasany Bodisma.
Ary Marcus Arelius’ saintsainina, maro ny Stoicism izay tena mitovy amin'ny Zen.
Ny fahafatesana mitsiky amin'ny rehetra, fa ny olona rehetra dia afaka atao dia ny mitsiky indray.
Ianareo manam-pahefana amin'ny ao an-tsainao – Tsy fisehoan-javatra ivelany. hahatsapa izany, dia hahita hery.
Ny fahasambarana eo amin'ny fiainanao miankina amin'ny hatsaran'ny ny eritreritrao.
Raha ianao no ory noho ny na inona na inona ivelany, ny fanaintainana dia tsy noho ny zavatra mihitsy, fa ny tombana izany; Ary izao no manana ny fahefana manafoana amin'ny fotoana rehetra.
Fontas Ny harena voalohany, nanao dia very. Tonga any aho koa.
Tsy misy afa-roa mety. Rehetra izany i vintana, sa fahaiza-manao?
Raha maraina ny vintana, dia nanana ny mampino ny alina teo am-Casino, fa tsy cashed avy. Amin'ny farany nahazo ny trano, toy ny manao foana. Nataony aorianao, manao mahatsikaiky momba izany, Ary ny tantara mba hilaza amin'ny trano fisotroana. Ny manga levitra.
Raha maraina ny fahaiza-manao, ianao maka ny pilina mena. Angony 3k hafa, ary manao izany rehetra indray. Mamerina fotsiny izay nanao ny taon-dasa – raha ny tena izy, Ho mora kokoa izany ary haingam-pandeha kokoa ho indray manodidina. Ianao dia ao ambadiky ny taona, izay sucks, fa ianao hiafara indray manao izany rehetra izany sy ny maro hafa. izany no, raha ny tetika tokoa feo.
Maro ny olona hanao sy harena voalohany intsony ny tsy manandrama indray, ary tsy hahafantaran'izy ireo mihitsy raha toa ka vintana na fahaiza-manao.
Dia tapitra ny mitsambikina ao amin'ny lavaka bitro rehefa very ny harena ara-barotra voalohany. Fanapahan-kevitra tsara indrindra teo amin'ny fiainako. Ny tonga ny anankiray dia haingana kokoa noho ny voalohany, ary be lehibe – vola tany am-boalohany dia toa miniscule izao.
Miankina aminao, raha te-hahita ny fomba lavaka lalina ny bitro mandeha.
zksnugsAzoko ny fanaintainana. Tena manao.
Indraindray Tahaka izay aho tsy tonga ho fantatra ny crypto. Izany sady fitahiana sy ozona. A fitahiana satria afaka mahazo 'adala gainzz', fa miaraka amin'izay koa,, ianao hatao Voafandrika eto amin'ity tontolo eerie, izay ao an-tsainao manitsaka ny hevitra toy ny fomba mety hisotro ronono ny mpanapitrisa raha tsy nivarotra tany am-boalohany / nanao izay ratsy varotra / nividy teo aloha sns. Tsy mino aho na oviana na oviana dia afaka ho afa-mandositra izany. Raha mbola miaina mandrakizay isika, dia ho mpanompo ireo eritreritra, izay foana mba hiverina tsain'ny antsika ny zavatra mety ho 'natao hafa'. Afaka mandeha tsy mety lasa ka manadino izany, tahaka ny inona no azontsika atao avy amin'ny toe-javatra mahamenatra. Satria raha olon-kafa dia afaka hanadino, na oviana na oviana isika dia manadino ny asa manokana.
FontasNy Zen fomba rehefa mifandray amin'ny fanaovana sy very ny harena – misy ihany 2 fahafaha. I vintana na izany fahaiza-manao.
Raha maraina ny vintana, dia nanana ny mampino ny alina teo am-Casino, fa tsy cashed avy. Amin'ny farany nahazo ny trano, toy ny manao foana. Ataovy izany rehetra izany aoriako, manao mahatsikaiky momba izany, Ary Ho lasa mampihomehy fotsiny tantara mba hilaza amin'ny trano fisotroana. Ny manga levitra.
Raha maraina ny fahaiza-manao, Aho nitondra ny pilina mena. Angony kely fototra, ary manao izany rehetra indray. Avereno izay nataoko voalohany ny manodidina – raha ny tena izy, Ho mora kokoa izany ary haingam-pandeha kokoa ho indray manodidina. izany no, raha ny tetika tokoa feo.
Maro ny olona hanao sy harena voalohany intsony ny tsy hahafantaran'izy ireo mihitsy raha toa ka vintana na fahaiza-manao.
Dia tapitra ny mitsambikina ao amin'ny lavaka bitro rehefa very voalohany dotcom varotra harena. Fanapahan-kevitra tsara indrindra teo amin'ny fiainako. Ny tonga ny anankiray dia haingana kokoa noho ny voalohany, ary be lehibe – vola tany am-boalohany dia toa miniscule izao.
Ny hany mampalahelo ahy dia mandany 2 ela mahantra taona ao an-tranon'ny Neny a teo anoloany izy rehetra kitihina ny lohako – vintana na ny fahaiza-manao, Mba tsy fantatro – raha tsy miezaka indray aho ka jereo. Ny fandehany dia fahaiza-manao.
gypsytoy Eny fa tena mafy. Heveriko fa ny hany valiny dia ny hahita bebe kokoa hafa sarobidy eo lafim-piainana. fifandraisana, fialamboly, manome indray. Misy be dia be ny fomba miezaka ho sitrana ny sainao rehefa zavatra toy izao, Mampanahy fotsiny aho tsy manana ny fitaovana na ny sitrapo hanao izany. Misaotra noho ny fanehoan-kevitra.
AjaxFC1900 Nieritreritra aho dia manam-pahaizana ara-barotra, andriamanitra, na inona na inona
Adinoy momba ny harena, sambo, trano fandraisam-bahiny sns…amin'ny fiafaran'ny andro izany izay rehetra momba ny fihetseham-po, mendrika ny olona rehetra mahatsapa toy izany, fara fahakeliny, indray mandeha eo amin'ny fiainana…nahatsapa ianao fa mahatsapa tena tanora…Tsy manelingelina be loatra, amin'ny fiafaran'ny andro rehetra izahay efa maty ankapobeny, dia tany amin'ny tetika ny zavatra tsy maninona fa raha be atao, na very 5 an-tapitrisany , milaza aminareo bebe kokoa ao amin'ny drafitra lehiben'ny ny fisiantsika zavatra tsy mampaninona izany, ary be, toy ny nolazaiko hoe: izahay efa maty rehetra ihany.
Efa sarotra ny, indraindray, tany aloha dia nampiasaina mba ho mora kokoa… toy ny handeha hiady sy handresy na izao tontolo izao, na mahazo bala teo amin'ny lohany na ho faty eo amin'ny an'ady…Ankehitriny dia tsy manao ireo zavatra ireo isika, raha ny marina intsony, ary tsy maintsy miatrika izany tsy fahombiazana izay lalana ratsy kokoa noho ny fahafatesana noho ny atidoha / saina. Izany no fomba mora kokoa avy eo miverina, fony mbola tsy manan-tsaina sy tia ady kokoa
Cinnamon_Twist Tena tia lojika ity. Ny olona tany aloha dia mampino manan-tsaina fotsiny satria tsy mipetraka eo amin'ny accumlated fahalalana ananantsika amin'izao fotoana izao dia tsy hahatonga azy ireo ho olon-. Afaka Mbola handeha hiady te raha tsy misy olona dia nijanona anao.
Izany fiainana koa ny filozofia tena mampalahelo. Tsy tena hita fa ny fiainana satria hiafara amin'ny farany ho anao izay tokony hahazo izany tsy misy dikany sy ny madinika.
JungleSumTimes Mino aho fa misy karazana fahafahana tratra tsy nahafantatra fa isika rehetra blips kely fotsiny eo amin'ny efijery lehibe. Rehefa manaiky ny tsinontsinona ny misy izany tena manafaka anareo ho amin'ny marina ho ny tenanao sy ho tahaka izany olona izany sy hiezaka hitady izay tianao fa tsy manahy ny fotoana rehetra momba ny fomba fiaraha-monina mitsara anao.
Ry zalahy mahazo izany ratsy izany, satria ny bankroll dia ampahany lehibe amin'ny fomba no jerena, ary tapa-kevitra ny ho fahombiazana eo amin'ny fiainana. Misy fepetra maro tsara kokoa.
pepe_le_shoe Poker manana singa fahaiza-manao, Fa raha misy ny filokana-mahadomelina Antes, dia hiloka. Mety hilalao mafy ho an'ny 2, 4, angamba 6+ ora, andro aza, fa amin'ny fotoana iray, dieny tsy mbola mandeha an-trano, dia hiloka. Izy no manana izany vetivety tsy nanehoan'i fananarana, tiany, indray mandeha monja, hanafika ny mifanohitra sy ny miloka rehetra ao amin'ny iray ao anaty mahitsy antsapaka, na manosika mafy loatra amin'ny ambany napetraka raha mahalala lalina fa natao avy voatsoaka.
Misy mpilalao Poker izay mandresy ny fotoana rehetra, angamba dia nahazo fahaiza-manao, ny maths, na mamaky ny olona. Fa tsy misy marina ireo olona ireo mpiloka. Mpiloka mandeha foana na inona na inona an-trano miaraka amin'ny.
Izany ahy nandritra ny fotoana kelikely. Tsy milalao-bola intsony.
SamAiken Tsy manana 200 BTC, fa efa teo amin'ny toe-javatra toy izany koa Jery mitongilana roa farafahakeliny in-. Tsy ianao no voalohany te hanan-karena haingana ary avy eo ny vola very rehetra. Soa ihany, tsy hiafara any am-ponja toy ny maro “hanan-karena fifadian-kanina” ny olona manao.
Araka ny zavatra nolazainao, manana fahalalana lehibe momba ny maha zava-dehibe ny banga sy ny voly hafa izay mety-fitantanana, koa miangavy mandany fotoana fikarohana izany. Ankehitriny ianao Naharikoriko amin'ny BTC ary fantatro izany fahatsapana tsara, fa handeha.
Misy vintana fa isika dia manana bearish tsena nandritra ny herinandro vitsivitsy na volana, mba manam-potoana ho tony, fanabeazana momba ny vola ny tenanao sy hiaraka aminay taty aoriana ny manaraka onja. Manana traikefa bebe kokoa sy ny fahalalana, noho ny salan'isa crypto mpampiasa vola.
Ary ankehitriny ny zava-dehibe anjara – mbola afaka hanorina indray ny portfolio-amin'ny rangotra, ratra kely! Ho haka kokoa, noho ny volana vitsivitsy, nefa afaka manao izany. nataoko. Maro ny olona no. Afaka manao izany, koa.
Ary ara-barotra mampidi-doza foana, saina ka tsy manampy misy vidiny ho an'ny fiaraha-monina na ny fiaraha-monina, ka mampiasa vola sy ny hodling dia be ny fomba azo antoka te hanan-karena, fa tsy varotra. Ny zokiny mahazo, ny adin-tsaina mampidi-doza kokoa ho anao, dia mety hamono anao mihitsy aza (e.g. fijanonan'ny fo tampoka). Koa ento ny fotoana, mianatra momba ny fitantanana doza-, tsy milalao amin'ny portfolio-manontolo, , na mahazo indray cryptos maro, aza adino ny rebalance ny portfolio-ny vola sasany mifindra ho Fiat vola, tena toetrany na boloky hazo.
Ankoatra ny mampiasa vola, masìna ianao, aza adino ny hifantoka amin'ny izay tianao hatao eo amin'ny fiainana afa-tsy noho ny maha-lehilahy manan-karena manidina fiaramanidina. Ahoana no te-hanampy ny olona, ​​ary mandray anjara amin'ny fiaraha-monina? Ary ny andro hampiasa vola ao amin'ity tari-dalana. ny traikefa, fahalalana sy ny lazany dia tsy levona tahaka BTC fotsiny no.
Aoka ianao ho hendry sy tony foana!
Live Watch News, Sports, Video...
Velona Watch vaovao, fanatanjahan-tena, and e...
Previous Post:Blockchain News 27 Janoary 2018
Next Post:Blockchain News 28 Janoary 2018